देउवाको अपमान गरेको भन्दै ‘घामड शेरे’ सुदूरपश्चिममा चल्न नदिने नेविसंघको चेतावनी – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated Nov 3, 2019 22 0
काठमाडौँ । कलाकार तथा निर्देशक आसिफ साहले माफी मागेका छन् । शनिबार फिल्म ‘घामड शेरे’ फिल्मको पोष्टर र नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादर देउवाको फोटोसँगै राखेर शाहले आफ्नो फेसबुक पेजमा पोष्ट गरेपछि उनी विवादमा मुछिएका थिए ।
उनले सार्वजनिक गरेको पोष्टलाई लिएर काँग्रेसका भ्रातृ संगठन नेविसंघ र तरुण दलले साहले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु पर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
नेविसंघ बैतडीका जिल्ला सभापति कपिल केसीले एक स्टाटस लेख्दै फिल्म ‘घामड शेरे’ सुदुरपश्चिमका कुनै पनि हलमा चल्न नदिने उद्घोष गरेका छन् ।
कलाकार जगतको कलङ्क आसिफ शाहले सार्वजनिक रुपमा आममाफी माग्नुपर्छ’ सभापति कपिलले अगाडि लेखेका छन् ‘होइन भने सुदुर पश्चिमको कुनै पनि हलमा फिल्म चल्न दिइने छैन र सुप प्रवेशमा त्यस्ता कलंकलाई पूर्ण निषेध गरिनेछ । जय नेपाल ।’
काँग्रेसका भ्रातृ संगठन नेविसंघ र तरुण दलको विरोधपछि शाहले अर्काे एक स्टाटस पोष्ट गर्दै अघिल्लो पोष्टबारे स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
‘मैले कोही व्याक्ति वा संस्थाको भावनामा चोट पुर्याउन चाँहेको थिइनँ । म कुनै राजनीतिक दलसँग नजोडिएको बताउन चाहन्छु’, उनले अगाडि लेखेका छन् ‘हल्का ठट्यौली मात्र गरेको थिएँ । तपाईंहरुलाई चोट परेको भए माफी माग्दछु ।’
माफीसँगै शाहले अघिल्लो स्टाटस समेत डिलिट गरेका छन् । तर उनको अघिल्लो स्टाटस उनको पछिल्लो माफी भरिएको स्टाटसको कमेन्टमा उनकै फ्यानले पोष्ट गरिदिएका छन् ।
आसिफ केही पहिले प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘दुई रुपैयाँ का निर्देशक कलाकार हुन् । उनी पछिल्लो समय नेपाल आइडल होष्टको रुपमा समेत चर्चित छन् ।
‘घामड शेरे’ आगामी शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म हो । यो फिल्ममा आसिफको कुनै पनि भूमिका छैन । हेमराज बिसीको निर्देशन रहेको फिल्ममा ‘रियललाइफ कपल’ स्वस्तिमा खड्का र निश्चल बस्नेतको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
महराको पक्षमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र बारका पूर्वअध्यक्ष
मन्त्रीको प्रश्न : गुठीका जग्गा कति अतिक्रमित भयो, त्यसको रेकर्ड खै ?
नेकपा मिलाउने पुनः प्रयासमा चिनियाँ राजदूत यान्छी,…
३ माघ २०७७, शनिबार ०६:५१